AllPass Pro နှင့် FineScanner PRO သည်ယခုရက်သတ္တပတ်မှစတင်ပြီးရောင်းမည်ဖြစ်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
AllPass Pro နှင့် FineScanner PRO သည်ယခုရက်သတ္တပတ်မှစတင်ပြီးရောင်းချရန်ရှိသည်
တနင်္လာနေ့အသစ်မှကြိုဆိုပါသည်။ ထိုမျက်နှာများကိုရွှင်မြူးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့မှာငါးရက်အကြာမှာအလုပ်ကြိုးစားသူ၊ လေ့လာမှုနှင့်အပိုတာဝန်အချို့ရှိသေးသော်လည်းလာမယ့်တနင်္ဂနွေကိုနှစ်သစ်ကြိုဆိုဖို့စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကတည်းက အိုင်ဖုန်းသတင်း ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခက်ခဲသောခရီးများ၌သင်နှင့်အတူပါ ၀ င်ရန်သင့်အားအကောင်းဆုံးသောနည်းများဖြင့်ပျော်ရွှင်စေရန်ကြိုးစားသည်
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့တနင်္လာနေ့ကနေစီးရီးစဖွင့်တယ် ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် applications များ သင်အခုပျော်မွေ့နိုင်သည် ဤရွေ့ကားသင်ယခုအခမဲ့ရနိုင်သည့်အနည်းဆုံးသိသိသာသာလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိနိုင်သောပေးဆောင်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လာမည့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှလွတ်မြောက်ရန်၊ iPhone X အသစ်ကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ဝယ်ယူမှုအသစ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်၏သူဌေး၏တောင်းဆိုချက်များကိုခဏရှောင်ရန်အနည်းငယ်ပိုသက်သာနိုင်သည်။
1 သင်၏စကားဝှက်များကိုလက်ဝယ်ထားရှိပြီး AllPass Pro ဖြင့်လုံခြုံအောင်ထားပါ
သင်၏စကားဝှက်များကိုလက်ဝယ်ထားရှိပြီး AllPass Pro ဖြင့်လုံခြုံအောင်ထားပါ
သင်လိုအပ်လျှင် အစွမ်းထက်ပြီးအကျိုးရှိစွာစကားဝှက်မန်နေဂျာ iCloud Keychain ကကမ်းလှမ်းသည်ထက် AllPass Pro ၎င်းသည်သင်ရှာဖွေနေသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်ယခုသင်၎င်းကိုရနိုင်သည် ကန့်သတ်အချိန်အခမဲ့.
AllPass Pro သည်သင်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သော application တစ်ခုဖြစ်သည် AllPass Pro ထက်စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ access credential များအားလုံးကို“ လုံခြုံရေး vault” တွင်သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုလုံခြုံရေးအကာအကွယ်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
AllPas Pro ဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ -
အားလုံးသိမ်းဆည်းပါ သင်၏အကြွေးနှင့် debit ကတ်အသေးစိတ်သင်၏ logins (အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်) နှင့်သင့်မှတ်စုများကိုပါထည့်ပါ။
ငွေပေးချေမှုနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အပြည့်အစုံ ကော်ပီကူးစရာမလိုဘဲအလိုအလျောက်, အလိုအလျောက်။
မြင့်မားသောလုံခြုံရေးစာဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုထားသည် 256-bit AES စာဝှက်စနစ်
ထောက်ပံ့ ဖိုလ်ဒါ ပိုကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်
အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များ စံတင်းပလိတ်များ သင်ဒေတာထည့်သွင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်။
Self- သော့ခတ်သင့်ရဲ့ iPhone ခိုးယူခံရခြင်း (သို့) ပျောက်ဆုံးသွားရင်တောင်၊ သင့်ရဲ့ဒေတာကိုလုံခြုံအောင်ထားနိုင်ခြင်း။
ထပ်တူပြုခြင်း သင်၏ iOS ထုတ်ကုန်များ၏အကြွင်းအကျန်များ - ၀ င်ရောက်ရန်အချက်အလက်များကိုသင်၏ iPad မှဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သိမ်းဆည်းပါ၊ ၎င်းကိုသင့် iPhone တွင်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။
အရန်ကူးခြင်း iCloud သို့မဟုတ် iTunes မှတဆင့်
၏ဖြစ်နိုင်ခြေ သင့်ရဲ့ဒေတာကို restore iCloud, Mail သို့မဟုတ် iTunes မှတဆင့်
သင်လုပ်နိုင်သည် သွင်းကုန်နှင့်တင်ပို့မှု သင်၏အချက်အလက်များကို CSV ဖိုင်၊ အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျသို့မဟုတ် iTunes မှတဆင့်ရယူသည်။
AllPas Pro တွင်ပုံမှန်စျေးနှုန်း ၃.၄၉ ယူရိုရှိသည်။ သို့သော်ယခု App Store တွင်၎င်းကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အလျင်စလိုလုပ်ရမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးအစားရှိအက်ပလီကေးရှင်းသည်ကြာရှည်ခံမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
AllPass Pro€ 1,99
အကယ်၍ သင်၎င်း၏အမည်မှသိပြီးသားဖြစ်လျှင်၊ အကယ်၍ သင်မသိသေးပါက "FineScanner PRO" သည်အသုံးဝင်သောအသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို PDF format ဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ.
App Store တွင်အလားတူ application အမြောက်အများရှိပြီးဖြစ်သည်။ အများစုမှာအခမဲ့ဖြစ်သော်လည်း function ကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်။ စာသားအသိအမှတ်ပြုမှု (OCR) 193 ဘာသာဖြင့် ဒါကနိုင်ငံခြားကိုမကြာခဏသွားတဲ့သူတွေအတွက်အဲဒါကိုပြီးပြည့်စုံစေသည်။ စာရွက်စာတမ်းနှုန်းအထိစာမျက်နှာ 100 အထိ, 12 output ကိုပုံစံများ (.docx, .pdf, .txt, စသဖြင့်) iCloud Drive သိုလှောင်မှု၊ အလိုအလျှောက်စာမျက်နှာနယ်နိမိတ်ထောက်လှမ်း, အရောင်ချိန်ညှိချက်များ, တောက်ပမှု, ဆနျ့ကငျြဘ, ထုတ်ကုန် Evernote ကဲ့သို့သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားအရာများ။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် "FineScanner PRO" သည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။
"FineScanner PRO" ၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ ၆၄.၉၉ ယူရိုရှိသည်။ သို့သော်ယခုသင်လုပ်နိုင်သည် 10,99 ယူရိုအဘို့အရ App Store တွင်မကြာမြင့်မီကာလအတွင်းအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ သငျသညျသူမ၏ကိုင်ချင်လျှင်ဒီတော့အလျင်အမြန်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကသင်ပြန်ပေးပြီးသင်၏ငွေကိုပြန်ယူနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
FineReader PDF PRO-PDF Scanner€ 59,99
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » အရောင်း » AllPass Pro နှင့် FineScanner PRO သည်ယခုရက်သတ္တပတ်မှစတင်ပြီးရောင်းချရန်ရှိသည်
အကြှနျုပျ၏အမှားမဟုတ်ရင်ဘာသာရပ်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ငါအရှက်ကွဲတယ်။ ငါကျပန်းငါ့အက်ဆေးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ကိုယ့်အရေးတကြီးနောက်ဆုံးပေါ်တစ်ခုတည်းထုတ်လုပ်ရန်သင့်၏။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်ဖြင့်မဖန်တီးနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ရရှိသော ၀ င်ငွေအတွက်အထောက်အကူပြုသည့်စာစီစာကုံးတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းအရာအပိုင်းအခြားအနည်းငယ်ကိုတွေ့ရှိသော်လည်း၊ ဤပံ့ပိုးသူများကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မနိုင်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှကြား၏ term-paper-time.com ?
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ Apple နှင့်မွမ်းမံရန်ကောင်းမွန်သောစာမျက်နှာ။ ကျွန်တော့်မှာ iOS 11 အတွက်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် AppStore အသစ်မှာဒီသီတင်းပတ်ရဲ့အခမဲ့ app ကိုကျွန်တော်မတွေ့မြင်နိုင်ပါ။ သူတို့ကဒီသီတင်းပတ်၏အခမဲ့ app ကိုဖယ်ရှားခဲ့သလား